STIM - Wikipedia, Njikotá édémédé nke onyobulạ
Sayensị, Teknụzụ, Injinia na Mgbakọ (STIM, Bekee: Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) ), bụ okwu ejiri mee ka ijikọ ndị a na agụmakwụkwọ.  A na-ejikarị okwu a mgbe ị na-agwa amụma agụmakwụkwọ na nhọrọ usoro ọmụmụ n'ụlọ akwụkwọ iji meziwanye asọmpi na sayensị na teknụzụ. O nwere ihe di n’iru mmepe mmepe oru, nchedo nchedo obodo na ndi isi obodo. Sayensị dị na STIM na-ezokarị ihe abụọ n’ime ngalaba atọ dị na sayensị : sayensị ndị sitere n'okike, gụnyere bayoloji, omụ̀ntụdi, na kemịkal, na sayensị, nke mgbakọ na mwepụ bụ ihe atụ, tinyere ezi uche na ọnụ ọgụgụ ; nke-atọ na isi alaka nke sayensị, na-elekọta mmadụ na sayensị, gụnyere akparamaagwa, sociology, na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị ọkà mmụta sayensị, na-categorized iche site na ndị ọzọ na abụọ alaka nke sayensị, na na-kama grouped ọnụ na Humanities na nkà na-etolite ọzọ counterpart acronym aha ya bụ HNSO - Humanities, Nkà, na Sayensị Out. (Bekee: HASS - Humanities, Arts, and Social Sciences 
Womenmụ nwanyị[mèzi | mèzi mkpụrụ]
Mụ nwanyị mejupụtara 47% nke ndị ọrụ US, wee rụọ ọrụ 24% nke ọrụ metụtara STIM.  Na UK ụmụ nwanyị na-arụ 13% nke ọrụ metụtara STIM (2014).  Na US ụmụ nwanyị nwere ogo STIM nwere ike ịrụ ọrụ na agụmakwụkwọ ma ọ bụ ahụike karịa nke STEM ubi ma e jiri ya tụnyere ụmụ nwoke ibe ha.
Oke okike dabere n’ihe ọmụmụ ọmụmụ. Dịka ọmụmaatụ, na European Union na 2012 ụmụ nwanyị mejupụtara 47.3% nke ngụkọta, 51% nke sayensị mmekọrịta, azụmahịa na iwu, 42% nke sayensị, mgbakọ na mwepụ na kọmputa, 28% nke injinia, imepụta na iwu ihe, na 59 % nke PhD gụsịrị akwụkwọ na Ahụike na Odịmma.
Kwuru okwu[mèzi | mèzi mkpụrụ]
↑ Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Education: A Primer.
↑ Language, Thought, and Values.
↑ Women in STEM: 2017 Update.
↑ Science careers face diversity challenge.
Wefụtàrà ya shí https://ig.wikipedia.org/w/index.php?title=STIM&oldid=65200
Oge ikpeazu Edeziri ihuakwụkwọ a bụ 3 Ọnwaàbụọ 2020, mgbe 14:27